Jawaari "Madaxda Xilalka ka degta, waa in ay helaan Xaquuqdooda" | KEYDMEDIA ONLINE
Jawaari “Madaxda Xilalka ka degta, waa in ay helaan Xaquuqdooda”
Muqdisho (KON) - Prof. Max’ed Cismaan Jawaari ayaa markii ugu horeysay ka hadlay Mowduuc aan hore looga hadlin, asagoo ka dalbaday Xildhibaanada in ay keenaan Sharci dhigaya in Guno looqoro Madaxda Xilalka ka soo qabata Dalka.
Afhayeenka Baarlamaanka ayaa sheegay in Xildhibaanada si dhaqsi leh looga sugayo in ay soo Gudbiyaan Sharcigaas islamarkaana loo gudbin doono Xukumada Cusub ee Soomaaliya si loo helo Xaquuqda Madaxda xilalka ka soo qabta Soomaaliya.
Jawaari: “Waxaa la Doortaa Madaxweyne ,R/wasaare Gudoomiye Baarlamaan intaba markii Xilka ay ka dagaan wey iska baxaan, waxaas Sharaf ma ahan, waa in laga fakaraa arintaas” Ayuu yiri.
Waa markii ugu horeysay oo Mas’uul ka tirsan Dowladda uu arintaan ka dhawaajiyo, ayadoona laga dhursugayo Xildhibaanada Soomaaliya waxa ay ka yiraadaan.
Dhinaca kale, Jawaari ayaa sheegay xilliga dib u eegista lagu sameynayo dastuurka KMG ah ee Soomaaliya.
“Baarlamaanka federaalka Soomaaliya waa golaha sharci dajinta dalka, wuxuuna dar-dar-gelinayaa dhammaan sharuucda dalka si ummaddu ay u hesho waaya-aragnimo ku dhisan Qaran, iyadoo uu barlamaanka hadda uu wado olole lagu dhageysanayo guuxa dadweynaha Soomaaliyeed, gaar ahaan shacabka ku nool Muqdisho,” ayuu yiri Jawaari.